मामाभान्जी छुरा र सितारामका कुरा | शहरबाट शब्दहरु
« अनलाइन पत्रिकामा स्पाइडरमैन !
‘ज्यापु समाजको मंगलबजारमा बृहत साँझ’ »
मामाभान्जी छुरा र सितारामका कुरा
२५ पुस, २०७१ तद्अनुसार ७ जनवरी, २०१५ (शुक्रबार) । बेलुका लेख्छु भन्दाभन्दै पनि कहिलेकाँही अप्रत्याशित कहीँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, लेखन छुट्छ । जसरी हिजो शुक्रबारको छुट्यो ।
शुक्रबारको दिन उठ्ने बित्तिकै रमाईलो लाग्छ । साताको रमाइलो गर्ने समय । उही शैलीमा बिहानी चियाको चुश्कीले दिनको शुरूवात भयो । आज धेरैपछि छोराछोरीलाई स्कूलको बस आउने चोकमा छोड्नुपर्ने जिम्मेवारी आयो । आज उनीहरूको स्पोर्टस् डे थियो । म छोड्न जाने बाटोमा पुलिस बिट पर्छ । बिटमा आज निकै भीडभाड र हल्लीखल्ली रहेछ । आँखैमा समाचार मनैमा समाचार भनेजस्तै म उतातिर तानिए । कुरा बुझ्दै जाँदा मामा र भान्जीको फोन प्रकरण रहेछ । धेरै कुरा आफ्नै डायरी लेखनमा समेट्न नमिल्ने हुने रहेछ । करिब दुई घन्टा चलेको दुईतर्फी भनाभन सम्वादमा म आधा घन्टा अलमलिएँ । त्यहीबेला थप नयाँ मित्रसँग परिचय भयो एनके श्रेष्ठसँग ।
यताउता, अन्तमा कार्यालयमा दाखिल भएँ । अनलाइनकर्मी साथीहरूसँग समाचारको चर्चा र अनलाइन पत्रिकाको शुक्र’bout अंक’bout छलफल भयो । साथीहरूले आजको अंकलाई मनपराए । अझै राम्रो बनाउनुपर्नेतिर जोड दिने वाचा गरे ।
दिउँसो दोलखा प्रतिनिधिसँग लामो कुरा भयो । अनलाइन पत्रिकालाई निरन्तर आइरहेको राम्रो प्रतिक्रियालाई हामीले फेरि समेट्न खोज्दैछौं । आजै फेरि अष्टसिद्धि टोल सुधार समितिका अध्यक्ष रत्न महर्जन दोलखा पुगेका रहेछन् ।
आजपनि धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग गफगाफ भयो । गोदावरीका साथीहरू, ललितपुरका अन्य आत्मिय साथीहरूसँग रमाइलो सम्वाद भयो । आज कार्यालयमा सिताराम हाछेथु आइपुगेँ । ललितपुरमा नयाँ ट्राफिक नियमका ’boutमा जानकारी गराए । खुशी लाग्यो, साँच्चिकै उनी परिवर्तन गराउनेतिर अग्रसर भएका रहेछन् । दैनिक नयाँ नियम र नयाँ प्रयोगका कारण पनि चर्चामा रहेछ सिताराम । धनगढीका साथी गोपाल साउदसँग पनि धेरै कुराहरू साटियो ।
बेलुका ज्यापुसमाजको नेवा भोजको निम्तो थियो । त्यसमा सहभागी भएँ । ‘एकपटक पढ्नुस्, मंगलबजारमा एक साँझ’ शिर्षकमा यस’bout चर्चा गर्छु । बेलुका ढिला घर पुगेँ । सबै सुतिसकेका रहेछन् । यसो टिभी खोलेर एकछिन विचरण गरे च्यानलहरू । आँखाले करिब करिब ढकनी बन्द गर्न खोेजेपछि सिरकभित्र पसेर शुक्रबारलाई बिदा गरे ।
This entry was posted on जनवरी 10, 2015 at 4:59 बिहान and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.